हार्दिक श्रदान्जली ?? भि,रबाट ल,डेर बालिकाको मृ,त्यु – Gorkhali Dainik
हार्दिक श्रदान्जली ?? भि,रबाट ल,डेर बालिकाको मृ,त्यु
March 23, 2021 512
डोटी । भि,रबाट ल,डेर अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–६ दर्ना चन्डालीकी ७ वर्षीया बालिका आयुशा ठकुल्लाको मृ,त्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहका अनुसार आज बिहान ८ः३० बजे विद्यालय जाँदै गरेको अवस्थामा भि,रबाटो भन्ने ठाउँबाट ल,डेर ग,म्भीर घा,इते भएकी थिइन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, मन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेता अहिले एमाओवादी केन्द्रमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । त्यतिमात्रै होइन माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु केपी शर्मा ओलीसँगै रहनुपर्ने हो ।”
“पार्टीको निर्णयअनुसार बादलसहितका मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता भइसक्नुपर्ने थियो तर उनीहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहेर ओलीलाई साथ दिएका छन् । अहिले राजनीतिक वृत्तमा फेरि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र विप्लवसहितका नेता एकठाउँमा उभिने तयारी गरेको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।”
“तर यो कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन् । उनले सबै कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । पूर्वमाओवादीका केन्द्रका नेता गोपाल किराँतीले सबै नेता एकैठाउँमा उभिने प्रस्तावसहितको पत्र पनि प्रचण्डसहितका नेतालाई पठाइसकेका छन् तर त्यसको जवाफ आउन नसकेको उनले बताए ।”
“एक हुन किराँतीले राखे प्रस्ताव
“एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि गोपाल किराँतीले निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र दर्ता गराए । तर सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले विकल्पमा पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्न लिन बोलाएको छ । यसैबेलामा किराँतीले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच एकताको प्रस्ताव राखेका हुन् ।”
“किराँतीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दलाई पूर्व माओवादी एक हुनका लागि पत्र पठाएका छन् ।”
“हामीले प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवलाई पूर्वमाओवादी नेताहरु एकैठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर पत्र लेखेका हौँ,” उनले कुराकानीमा भने, “हामी समाजवाद भन्छौं । वैद्य जनगणतन्त्र भन्नुहुन्छ । त्यो सबै एउटै हो त्यसैले एकता गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ ।”
“एक हुने अवस्था होला ?”
;माओवादी केन्द्रले एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । सत्ता समीकरणका लागि माओवादी, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच छलफल पनि भए । तर, निष्कर्ष भने निस्किएको छैन ।यसैबीच माओवादी र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईसँग एकताको चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।”
“पछिल्लोपटक दाहाल र भट्टराईबीच भेटघाट पनि बाक्लिएको छ । तर, प्रचण्ड र बाबुरामको वार्ता एकताको तहसम्म पुगिनसकेको दुवै नेताका सचिवालयले जिकिर गरे । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि एक हुने विषयमा प्रवेश नगरेको जिकिर गर्छन् । “राजनीतिक स्तरमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो, एक हुनेगरी कुरा भएको छैन,” उनले भने ।”
“त्यस्तै भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेल पनि एक हुने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री हटाउने र संविधानको रक्षाका विषयमा मात्रै छलफल भएको उनले सुनाए ”
“एजेण्डा एकताको होइन । ओलीको बहिर्गमन र संविधानको रक्षार्थ लोकतान्त्रिक टिमसँग गठबन्धन गर्ने र सरकार निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । छलफल त्यसमै केन्द्रित छ । पछि सहकार्य गरेर जान सक्ने कुरा त छँदैछ,” उनी भन्छन् ।किराँतीको पत्र आए पनि त्यो विषय अहिले प्राथमिकतामा नरहेको उनले बताए ।”
Prevनायिका केकी अधिकारी चढेको गाडी ६ फिट त’ल ख’स्यो…यस्तो छ अहिले उनको स्वास्थ्य अबस्था (हेर्नुहोस् भिडियो)
६ महिने शिशुलाई औ’षधि भन्दै आफ्नै आमाले बि`ष खुवाए